Isku-dhafka qoraalka | Hal-abuurka khadka tooska ah
Encarni Arcoya | 29/03/2022 12:37 | La cusbooneysiiyay 31/03/2022 23:41 | Dhiirrigelinta
Dhawr jeer ayaanu kuu sheegnay in aanay wanaagsanayn in la isticmaalo xarfo kala duwan oo nashqado ah, sababtoo ah waxa ay ka dhigaysaa daawadaha in yar oo dhan lumin. Laakiin waxay noqon kartaa laba ilood. Laakiin, sida loo sameeyo isku-darka font? Laba aad u kala duwan ma la isku dari karaa? Ma tahay inaad raacdo xeerar?
Mawduucan ayaa laga yaabaa inuu ku xiisayo haddii aad tahay naqshadeeye garaaf ama si fudud qoraa, maadaama ay ku siin doonto furayaasha si aad u ogaato waxa isku dhafan ee ugu fiican si qoraalka ama mashruucu u muuqdo mid qumman. U tag?
1 Waxa ay tahay inaad maskaxda ku hayso markaad isku dhafka xarfaha
1.1 Hubi toosinta iyo akhrinta qoraalka
2 Isku darka qoraalka qoraalka ee la garaacay
2.1 Montserrat iyo Courier Cusub
2.2 League Spartan iyo Baskerville lacag la'aan ah
2.3 Nixie One iyo Lato Light
2.4 Josefin Slab iyo Fauna One
2.5 Ganacsiga Gothic iyo Sabon
Waxa ay tahay inaad maskaxda ku hayso markaad isku dhafka xarfaha
Kahor intaanan ku siin tusaalooyinka isku-dhafka xarfaha, waxaan rabnaa inaad maskaxda ku hayso laba shay.
Midda koowaad waa inaadan isku qorin wax ka badan 2 xaraf oo isku mid ah. Sababta ayaa ah in aad si xad dhaaf ah u xoojiso booska, mana aha oo kaliya, laakiin waxa aad lumisay xiisaha daawadaha.
Tusaale ahaan, qiyaas inaad leedahay dabool. Waxaad ku dhejisay cinwaanka xarfo; subtitle la mid kale. Iyo qoraaga mid kale. Ma kula tahay inay isku mid yihiin? Maxa ka mid ah mashruuca? Waxa ugu badbaado badan waa in aanay taasi dhicin, taas oo la macno ah in isticmaaluhu aanu garanayn waxa laga filayo.
Sidoo kale, xarfaha kala duwan ayaa ka dhigi kara mid aad u jahwareersan. Sidaa darteed, had iyo jeer way wanaagsan tahay in la sameeyo ugu badnaan laba farood oo isbeddel ah.
Dhinaca labaad ee ay tahay inaad xakamayso waxay khusaysaa noocyada xarfaha. Haddii ay dhacdo inaadan garanayn, waxaa jira xarfo kala duwan oo ay tahay inaad tixgeliso marka la isku darayo. Si aad fikrad ku siiso, waxaad haysataa:
Serif: waa hab-qoraalka lagu garto in xarfaha dhammaadkooda uu dhammayn yar leeyahay. Tani maaha in loo arko qurxinta xad dhaafka ah, laakiin sidoo kale waxay noqon kartaa mid yar. Waxay la mid tahay Qurxinta oo kale.
Sans serif: haddii ka hor inta aanaan kuu sheegin in xarfaha ay lahaayeen wax qurxin, kiiskan nooca farta ah ayaa ka maqan, isagoo fudud.
Script: Waxa kale oo loo yaqaan farta gacanta lagu qoray. Waa qoraal aad mooddo in gacan lagu qoray, badhaadhe iyo tafaasiil gaar ah leh.
Slab serif: Waa nooc ka mid ah qoraallada lagu garto serif dhumuc weyn leh (qurxin).
Hubi toosinta iyo akhrinta qoraalka
Arrin kale oo aad u tiro yar ayaa xisaabta ku dareysa, aadna muhiim u ah marka la dooranayo isku-dhafka qoraalka, waa toosinta qoraalka iyo sidoo kale akhrintiisa.
Waxaan ku bilaabaynaa toosinta, taas oo ah, haddii qoraalka la doonayo in loo akhriyo si toos ah bidix, midig, dhexe ama xaq. Iyadoo ay ku xiran tahay tan, font in la isticmaalo ayaa noqon doona mid ka duwan, sababtoo ah sida caadiga ah, iyo kiiskan waxaan ka hadleynaa naqshadaha garaafyada, qurxinta qaar ayaa lagu dhejin doonaa hareeraha.
Dhanka kale, waxaa jiri lahaa akhrinta qoraalka, taas oo ah, haddii ay u socoto bidix ilaa midig, midig ilaa bidix ama si toos ah. Midda dambe, doorashada far si fiican loo akhriyi karo oo kuu oggolaanaysa inaad wax akhrido adigoon lumin aragtida ereyga ayaa ka muhiimsan qurxinta aad ku dhejiso.
Isku darka qoraalka qoraalka ee la garaacay
Sida aan sidoo kale rabno inaan noqono kuwo wax ku ool ah oo aad heli karto tusaalayaal isku-darka farta, halkan waxaa ah fikrado ku imaan kara anfaca.
Montserrat iyo Courier Cusub
Farshaxanka Montserrat waa mid aan marar kale kaaga sheegnay sababtoo ah waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan samaynta cinwaannada iyo cinwaannada. Sidaa darteed, waanu ku bilownay.
Waxa lagu gartaa in ay xarfaha xarafkeeda ku jirto xarfo dhammaystiran oo wareegsan. Waa dhumuc weyn.
Sidaa darteed, midka ugu fiican ee lagu daro tan waa mid jilicsan oo jilicsan. Waxaan u dooranay Courier New sababtoo ah waa fargeeto u eg makiinada wax lagu qoro laakiin taas lafteeduba muujisa. Laakin haddii aadan taas rabin, waxaad dooran kartaa weji far gacanta lagu qoray (kaas oo u dhigma far-qoritaan) mid la akhriyi karo oo aan aad u fududayn. Ama xitaa Times New Roman font.
League Spartan iyo Baskerville lacag la'aan ah
Halkan waxaan ku haynaa tusaale kale oo raacaya laxanka kii hore. Taas macnaheedu waxa weeye, waxaan dhignaa far qaro weyn sida madaxa ama cinwaanka, sida League Spartan (oo ah sans serif) iyo farta qoraalka waxaan u isticmaalnaa Libre Baskerville, taas oo haddii aad eegto ay leedahay qurxinta yaryar laakiin way fiican tahay. mid aad loo akhriyi karo, taasina waxay si fiican uga duwan tahay kii hore.
Xataa qoraal-hoosaadyada madax-hoosaadka waxaad sidoo kale isticmaali kartaa Libre Baskerville cabbir ka weyn.
Nixie One iyo Lato Light
Xaaladdan oo kale waxaan ku siin doonaa tusaale kale oo ka mid ah qoraallada isku dhafan oo ku iman kara anfacaya. Oo waa in labadooduba ay noqon karaan iftiin, laakiin haddii aad eegto, way ka duwan yihiin midba midka kale.
Dhinaca kale, waxaan haynaa Nixie One, nooc ka mid ah xarfaha serifka ah oo aan ku dhejineyno dhammaan koofiyadaha si aan uga dhigno mid u soo baxa cinwaan ahaan. Dhanka kale, waxaad haysataa Lato light, kaas oo ah sans serif oo maamusha inuu abuuro nakhshad qurux badan oo iftiin leh.
Dhab ahaantii labada faroodba waa iftiin, laakiin qoraalka oo xarfaha u dhexeeya meel bannaan ah ayaa u oggolaanaysa inuu sii dheeraado oo la akhriyo; halka ciwaanka uu leeyahay xarfaha ugu lifaaqan oo lagu shubay wax yar.
Josefin Slab iyo Fauna One
Josefin Slab waa mid ka mid ah xarfaha ugu badan ee loo isticmaalo, gaar ahaan cinwaannada iyo xitaa calaamadaha sababtoo ah waxay soo jiidataa dareen badan waxayna ku guulaysataa saameyn aad u xiiso badan. Intaa waxaa dheer, inkastoo laga yaabo inaysan u muuqan, dhammayntu waa kuwo adag.
Markaa, waa inaad doorataa weji-qoyseedka jilciya guud ahaan, taasna waxaad dooran kartaa Fauna One, laakiin waxaan sidoo kale soo jeedineynaa Nunito Light ama Merriweather kuwaas oo la mid ah oo sidoo kale ku guuleysta saameyntaas.
Xaaladdan oo kale, halkii aan ka dooran lahaa farta serif ee qoraalka, waxaan u doorannay ciwaanka, si aan diiradda u saarno isticmaalayaasha halkaas oo, ka dibna, ku dhex darno qoraal taxane ah oo sans ah, akhrin fudud iyo ku suurtowdo istaroog ka fudud kan ciwaanka.
Hadda oo aad ogtahay isku-darka font-ka, waxaa laga yaabaa inaad fikrad ka haysato sida loo doorto xarfaha kala duwan ee naqshadahaaga ama mashaariicdaada. Ma ka fikiri kartaa wax kasta oo xarfo ah? Noogu daa faallooyinka!
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Isku-dhafka qoraalka